Dhisay Dana xun Farqiga - Cusub & Used Models Available 877-776-4600
Dhisay Dana xun Farqiga2019-02-08T15:52:24-05:00
Waxaan oolin line a full of dhiso Dana xun Farqiga calaamadaha diyaar u ah inay markab baxay meel kasta oo dunida ku haboon in albaabka. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin liis dhamaystiran oo xirmooyinka rakibaadda, positraction and lockers, Fiilada & mini spools, xaaladaha & geerka caaro, Katiinado pinion, axle bearing kits, xirmooyinka seal, axle shafts along with performance & qaybaha tartanka, daboolida kala duwan, qaybo ka mid & accessories, guryo kale, xubnaha saddexaad, xirmooyin kala jejebiyey, drivelines, geerka iyo nooc marsho. maalin isku mid ah maraakiibta la heli karo, dunida oo dhan. Nala soo xiriir maanta 877-776-4600 ama 407-872-1901. To view our new used and rebuilt Dana xun Farqiga calaamadaha for sale booqo Waayo, qaybta Sale. Haddii aadan heli model aad u baahan tahay, nala soo xidhiidh si aan u heshaan kartaa adiga kuu.
Sida loo Aqoonso aad Model kala
The Bill of Waxyaabaha (WANAAGSAN) tirada waxaa loo isticmaalaa si loo aqoonsado oo kala Dana. BOM wuxuu aqoonsanayaa tirada model ah, ratio marsho ah, nooca kala duwan, iyo dhammaan qaybaha ka kooban. Dhaqameedyada ayaa BOM ee 6 lambar raacay by 1 ama 2 lambar oo bilaabo lambarada 60 ama 61. On tags qaar ka mid ah, Kii ugu horreeyey 2 lambar ma muuqan on tag ah, laakiinse iyagu waa in la isticmaalaa si loo ogaado dariiq dhexaad ah. Later BOM ayaa laga yaabaa in marka hore bilaabaan 3 lambar ah 200, Laakiin waxyaalahan waxaa loo caadi ahaan ma hoos ka tag ah.
Single Drive dariiq dhexaad
Tusmo Drive dariiq dhexaad
Dana Spicer kala Set-up sooc
Pinion dhalista (loader – Cusub)
Pinion dhalista (loader – loo isticmaalo)
Ring Gear Bolt Xuddunta
Sita Cap Xuddunta
60, 61, 70The 17-30 [inches-pounds] 8-10 [inches-pounds] 6-10 [.001″] 110 [cag-pounds] 80 [cag-pounds]
70 & 70HD 20-35 [inches-pounds] 8-10 [inches-pounds] 6-10 [.001″] 110 [cag-pounds] 80 [cag-pounds]
80 25-40 [inches-pounds] 9-11 [inches-pounds] 4-10 [.001″] 175 [cag-pounds] 80 [cag-pounds]
Wac maanta, hesho dhiso Dana kala duwan berri!